Akụkọ - Methionine na-ere ahịa na ala dị ala
Methionine ahịa hovering na ala nso
N'ọdịnihu dị nso market ahịa methionine nọ na-arụ ọrụ n'ime usoro ala akụkọ ihe mere eme, ọ dịkwa nso nso a. Ọnụ ego dị ugbu a bụ RMB 16.5-18 / kg. A na-eji nwayọọ nwayọọ ewepụta ike imepụta ụlọ ọhụrụ n'afọ a. Onu ahia juru eju ma onodu di ala na-acho. Nkwupụta ahịa ndị Europe dabara na 1.75-1.82 euro / kg. N'inwe mmetụta site na ahịa azụmaahịa na-adịghị ike na uto na mmepụta ụlọ, mbubata methionine ajụla na ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
Site na Jenụwarị ruo Julaị 2020, mbubata methionine nke mba m na-ada site na 2% kwa afọ
Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị kọstọm, na July 2020, mba m webatara 11,600 tọn nke ngwaahịa methionine siri ike, nbelata ọnwa nke ọnwa nke tọn 4,749, mbelata afọ nke 9614.17, mbelata nke 45.35%. Na Julaị 2020, obodo m si na ụlọ ọrụ Malaysian weta tọn 1,810, na-abawanye nke ọnwa 815 kwa ọnwa na mbelata afọ 4,813 tọn. N’ọnwa Julai, mbubata nke mba m si na Singapore gbadara nke ukwuu na tọn 3340, onwa n’ọnwa n’ọnwa nke tọn 4840 na afọ ndapụta kwa afọ nke tọn 7,380.
Site na Jenụwarị ruo Julaị 2020, methionine mba m na-ebubata ihe ruru tọn 112,400, na-agbada 2.02% kwa afọ. Mba atọ kachasị elu bụ Singapore, Belgium, na Malaysia. N'ime ha, mbubata si Singapore gụrụ maka ọnụ ọgụgụ kachasị elu, yana mbubata nke 41,400 tọn, na-echekwa 36.8%. Site na Belgium, ọnụego mbubata ọnụ sitere na Jenụwarị ruo Julaị bụ tọn 33,900, mmụba kwa afọ nke 99%. Ọnụ ọgụgụ mbubata si na Malaysia bụ tọn 24,100, gbadata 23.4% kwa afọ.
Polọ ọrụ ọkụkọ na-efukarị ego
Mgbe mgbasawanye nke ụlọ ọrụ ọkụkọ na-ezute ọrịa okpueze ọhụrụ, arụmọrụ nke ịzụlite ọkụkọ na-egbu oge. N'afọ a, ndị ọrụ ugbo enwekwaghị mfu oge karịa. Ọnụ ego nke ọkụkọ broiler azụmahịa bụ 3.08 yuan / kg, gbadaa 45.4% kwa afọ na 30% afọ. Oria oria swine nke Afrika nwere oke uzo ozo na onu ahia adighi ike. Ọbụghị naanị broilers na akwa na-efunahụ ego, mana ọbọgwụ anụ anaghị enwekwa nchekwube. N'oge na-adịbeghị anya, Feng Nan, odeakwụkwọ ukwu nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ahịa ọkụkọ nke Shandong Animal Husbandry Association, kwuru na ọnụ ọgụgụ ọbọgwụ ugbu a na ụlọ ọrụ ọbọgwụ nke mba m dị n'etiti nde 13 na nde 14, nke gafere oke nke ọkọnọ na mkpa . Nnukwu ikike emeela ka uru ụlọ ọrụ daa, ụlọ ọrụ ọbọgwụ ahụ nọkwa n'ọnọdụ na-efu ihe gafere usoro ọrụ ụlọ ọrụ dum. Ntda ada n’ebe a na-azụ anụ ọkụkọ anaghị adabara mmadụ chọrọ, ahịa methionine na-agbadakwa ala.
Na mkpokọta, ọ bụ ezie na mbubata mbubata nke methionine agbadata na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọ na-adịbeghị anya na-akọ na osisi methionine US akwụsịla mmepụta n'ihi oke ifufe US. Agbanyeghị, nrụpụta ụlọ na-arụpụta abawanyela, ihe ndị nrụpụta kwuru na-esighi ike, arụmọrụ ọkụkọ ọkụkọ adịghị ike, na inye methionine bara ụba na adịghị ike adịte aka O siri ike ịgbanwe.
Nri oriri na-edozi ahụ, L-Threonine Nri Nri, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Pharm ọkwa, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine,